China Chitofu-inokodzera Moto Isina Mat YeKambi Kambi Mugadziri uye Mutengesi | Ndarama yegoridhe
Zvinhu: Girazi Fibhi uye Silicone
Saizi: 50 * 100 masendimita
Fireproof Mat Tsananguro
Muti usina moto unogadzirwa nemoto unodzora uye unopisa moto. Kunyangwe yako nzvimbo iri huni, inoumbwa, ibwe, kongiri kana huswa, yedu yekupisa huni zvishongedzo zvinodzivirira yako patio pevhu kubva pakupisa, kupisa kukuvara, kupisa deformation, girisa kurasira, samende matangi uye nezvimwe. Mativi ese maviri akafanana zvinhu zvisingatsvi nemoto, unogona kushandisa chero divi zvakananga. Midziyo yechitofu chehuni inogona kushandiswazve kakawanda. Izvo zvinhu zvinoenderana zvakakwana neakanyanya anti-kusakara, anti misodzi, oiri-uye isina mvura kuita.
Iyo yekudziya mat padhi dziviriro haizodzivise kupisa kubva kuendeswa kunzvimbo dzinoonekera senge turu kana huni. Paunenge uchipisa pahuswa kana kushongedzwa kwekupisa, unofanirwa kushandisa nhare yekupisa. Kana zimbe rikangowira mumeti, tinofanirwa kuribvisa kudzivirira kupisa kwakasara kubva pakubheka dhizaini kana turufu. Panguva imwecheteyo, hakuzove nekutsamwa kwefibre uye kudzivirira chikafu kubva mukudonha kubva mukutonga nekunamatira kune iyo fiber. Zvigadziri zvinopisa matanda zvinogona kucheneswa zviri nyore nemuchina wekuwachisa, kuwacha mawoko kana vacuum. Inokodzera makomba emoto uye grills ane makumbo mabhesi. Usaise simbi pazasi kana zvimwe zvinopisa kupisa zvakananga padenga remoto pamusoro.
Isina Moto Mat Mifananidzo
Pashure: Yakasimba Takura Bhegi Yekutakurika Chitofu
Zvadaro: Steel Spark Kusungwa KweChimney
Musasa Wood Burner
Isina Moto Mat
Isina moto Mat yeDheki
Fireproof Mat For Fire Gomba
Fireproof Mat For Wood Chitofu
Musasa Wood Burner, Stainless simbi chitofu, Kunze Kwehuni Kunopisa, Bindu Kubika Chitofu, Camping Stove Mvura Tangi, Tende Wood Inopisa Chitofu,